I-CMRA, umtya wekhamera kwi-Apple Watch yakho | Iindaba zeGajethi
Ukususela Apple Watch yangena kwimarike ngo-2014, inkampani yaseNyakatho Melika yabhengeza ukuba babengenanjongo zokubandakanya uhlobo oluthile lwekhamera kwiwotshi yabo ebukhali kuba, ubuncinci kubo, ikhamera ekwisixhobo esinezi mpawu yayixabisa ngokupheleleyo. Njengoko kusengqiqweni, abasebenzisi abaninzi bayasixhasa esi sigqibo nangona, kwabanye, kunokuba sisongezo esibaluleke kakhulu ukuba siqwalaselwe.
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abangathanda ukuthatha iifoto kwi-Apple Watch yakho, xelela ukuba namhlanje ungafumana Umtya omtsha we-CMRAImodeli eyenziwe yinkampani iGlide leyo, njengoko ubona kwifoto ebekwe phezulu kule post, ukongeza ekuboniseni uyilo olufana ncam nolo lweemodeli zemidlalo ze-smartwatch eyaziwayo, inekhamera I-megapixels ze-8 kunye nenye ye I-megapixels ze-2.
Xhobisa iApple Watch yakho ngekhamera kwiifoto kunye nevidiyo ubize umbulelo kwiCMRA corra.
Njengeenkcukacha, xelela loo nto Umtya omtsha weCMRA unebhetri yawo ethi yona iphinde igcwaliswe ngokulula kusetyenziswa ichweba, elikuvumela ukuba uhlawulise kwangaxeshanye ibhetri yeApple Watch yakho. Okwangoku inkampani ayibonelelanga ngeenkcukacha ezininzi malunga nokusebenza kwale nethiwekhi, nangona beqinisekisa ukuba i-CMRA izakuvumela abasebenzisi ukuba bathathe imifanekiso kwaye benze neminxeba yevidiyo ngokulula nangokukhawuleza.
Ukuba unomdla wokufumana enye yezi ntambo, ndikuxelele ukuba umenzi-mveliso uceba ukuwazisa kwintengiso elandelayo. Ngaphandle koku, inkampani sele ikwamkele ukubhukisha ngexabiso leyunithi nganye IRandi ye199. Ukuba uthatha isigqibo sokuyilinda ukuba ifumaneke ngokusemthethweni kwintengiso, ixabiso liya kunyuka liye kuthi ga IRandi ye249. Ukuba ungomnye wabokuqala ukwenza ugcino, ixabiso liya kuncitshiswa kude kube IRandi ye149 ngeyunithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » I-CMRA, umtya wekhamera kwi-Apple Watch yakho